प्रविधीको प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ:योगेश भक्त बादे श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी
प्रभु इन्स्योरेन्सको अफिसर तहबाट आफनो करिअर सुरु गरेका योगेश भक्त बादे श्रेष्ठ हाल आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी रुपमा कार्यभार समालिरहेका छन् । यस अघि आईमईमा नै कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठलाई कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गरेको हो ।
श्रेष्ठ २३ वर्षदेखि निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसै सन्दर्भमा कम्पनीको हालको स्थिती र आगामी रणनितीहरुको बारेमा उनी श्रेष्ठसँग इन्स्योरेन्सखबरकर्मीले गरेको कुराकानीको सार ः
बीमाको बजारको हालको स्थिति कस्तो रहेको छ ? यसमा निर्जिवन बीमाको बजारको अवस्था के छ ?
बीमाको हालको स्थितीलाई हेर्ने हो भने यसको बजार राम्रो नै रहेको छ । बैंकहरुमा भएको तरलताले यसमा केही समस्या देखिरहेको छ । बीमाको बजार पछिल्लो समयलाई मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने कम्पनीहरु बढेसँगै यसको बजारमा परिर्वतन आईरहेको छ । हिजोको दिनमा बजार पनि यही अनुसार रहेका थियो । बीमाको पहुँच पनि १२ बाट १४ प्रतिशत पुगेको छ ।
कम्पनीहरुमा थप तिन नयाँ कम्पनीहरु थपिएका छन् यसले बीमाको बजारलाई कस्तो असर गर्दछ ?
बीमा कम्पनीहरुमा पहिला नै १७ वटा कम्पनीहरु रहेका थिए । जसमा ३ वटा नयाँ कम्पनीहरु थपीएका छन् । यसले बजारमा राम्रो नै भएको छ भन्नु पर्दछ ।
2019-01-29 - 153 view(s) - insurancekhabar